राजनीति, अपराधीकरण र नयाँ संविधान
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका दृश्यलाई सिंवालोकन गर्दा सामान्य अर्थ राख्ने छैनन् । यी घटनाक्रमहरुले दुरगामी असर पार्ने देखिन्छ । मुख्यतः हिजो आन्दोलनको बलमा स्थापित संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीजस्ता मुद्दाहरुमाथिको प्रहार भनेको अन्तत्वगत्वा इतिहासको रथलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न नै हो । नेपालमा विभिन्न किसिमका उत्पीडनका स्वरुप छन् र त्यसलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक अभियानमाथि अहिले चौतर्फी हमला भइरहेको छ । कतिले बुझेरै योजनाबद्ध रुपमा हमला बोलिरहेका छन् भने बुझ्दै नबुझी भावनात्मक रुपले उद्वेलित भएर उक्त हमलामा साथ दिइरहेका छन् ।
यो प्रतिगमनकारी तत्व भित्र वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँग मुख्यतः नेपालको प्रगति हुन नचाहनेहरुको पनि घुलमिल छ । सदियौदेखि नेपाललाई आफ्नो चंगुल भित्र राखेर र केही भरौटेको इशारामा आफ्नो हैकम जमाउने चाहने वैदेशीक शक्तिहरु अहोरात्र खटिरहेका छन् । ति शक्ति केन्द्रसँग हाम्रा नेताले हो मा हो मिलाउने प्रवृत्तिका कारण आज देश ठूलो संकट बाट गुज्रिरहेको छ ।
जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक कारण उत्पीडनममा परेका सम्पूर्ण समुदायलाई अधिकार, आमजनतामा सम्मान दिनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले अपहेलना गर्छ भने ति समुदाय आत्म सम्मानका निम्ति जुर्मुराउनु नौलो विषय होइन । राज्य भष्ट्राचारीलाई २१ किलोको मालाले सम्मान गर्दै सँस्कृतको मन्त्र जप्दै चोख्याउन लाग्छ, अनि उत्पीडनमा परेका समुदायले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार माग्दा बम, गोली वर्साउँछ भने यो राज्यला२ कसरी कल्याणकारी राज्य भन्न सकिन्छ ! वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व दिनानुदिन तानासाही बन्दै गइरहेको छ । विभिन्न नियुक्तिका सन्र्दभमा पनि निरन्तरता र क्षमताका आधारमा नभई आफ्नो आसेपासेलाईमात्र चयन गर्ने हँुदा सरकारी संयन्त्रप्रति आममानिसको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको तितो यथार्थ हो । अझ दोस्रो संविधानसभापछाडि राजनीतिमा टोले सुकुल गुण्डाहरुको ठूलै संख्यामा उपस्थिति छ । केहि त सुकुल गुण्डाबाटै मन्त्रीसमेत बनेका पनि छन् ।
वर्तमान राजनीतिको चित्रण यतिलेमात्र हुँदैन । राज्यको प्रमुख संयन्त्रमा सुकुल गुण्डाहरु र यसलाई संरक्षण गर्नेहरुको बोलबाला रहेको छ । यतिमात्र होइन भष्ट्रहरुको अखडा बनेका संयन्त्रबाट जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँचिदै, मानौँ यिनीहरु भगवान हुन्, जनता सबै उनका भक्त ! मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा पैसाविना पनि हुन्छ यिनीहरुको तोकिएको रकम यो वा त्यो वहानामा दिनैपर्छ । यस्ता द्रव्यपिचासहरुलाई सजाँय दिने संविधान आजको आवश्यकता हो । तर विडम्बना यी तिनै राजनैतिक दल र वैदेशिक शक्ति केन्द्रको आडमा जनताका ढाड सेक्न माहिर छन् । पुलिस र सेनालगायत अन्यामा पनि यो समस्या व्याप्त छ ।
यसकारण राज्यका सम्पूर्ण अंगमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । राजनैतिका दल र तिनका भातृ संगठनमा पनि परिर्वतनको आवश्यकता छ । रुपमा मात्र नभइ सारमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने वर्तमान समयको माग हो । अझ राजनैतिक दलमा बढ्दै गएको अपराधीकरणले गर्दा समाजममा व्यापक अरजकता पैदा भएको छ । बेलैमा वर्तमान नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको खण्डमा गान्धी, बेनजिर भुट्टो र मदन भण्डारी हत्याकाण्डजस्ता घटना नघट्लान भन्न सकिन्न ।
पछिल्लो समयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि बेला–बेलामा आक्रमणका प्रयास भएका छन् । यस किसिमका क्रियाकलापले हाम्रो समाज राष्ट्र कुन दिशातर्फ जाँदै छ, प्रत्येक नागरिकलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
अफसोच भन्नुपर्छ वर्तमान समयमा हाम्रो समाज राष्ट्र तथा राजनितिक दल र प्रसासन क्षेत्रमा व्यापक रुपमा भष्ट्र धमिरा लागेका छन् । यिनैको आवरणभित्र अपराधीकरण भएका छन् । यसको अन्त्यबाट मात्र राष्ट्रमा शान्ति छाउँछ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चयन भएकाले नै देशमा जनयुद्ध भयो । अब बन्ने नयाँ संविधानमा सबैलाई बराबर नजरबाट राज्यले हेर्नुपर्छ ।
जनतालाई आफ्नो अधिकार र जनताको घाउमा मलम लगाउने संविधान नै नयाँ बन्ने संविधानको मूल मर्म हुनुपर्दछ । यी चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिएर वर्तमान शीर्ष नेतृत्वले नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकेको खण्डमा जनताको पक्षमा राम्रो काम भएको ठहरिने छ ।
(लेखक एमाओवादीसम्वद्ध अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)